2008 : Samia ho sambatra tokoa e !
Nampidirin'i tsikisariaka | 4 Jan, 2008
Tonga ihany aho !
Lany andro nampitaha
Nivezivezy saika very
Nandefa lavitra ny saina
Naminany ampitso koa
Naniry ho to izay ilaina
Sy izay heverina ho soa
Dia tonga ihany aho nandrafitra
Tononkalo sy ny vetsoko
Hirariako soa mba ho finaritra
Antsika izay mandalo eto
Ho tahian'ny Avo haharitra ela
Ny sotasota anie ho tavela
Samia ho sambatra tokoa
Nampidirin'i tsikisariaka | 19 Des, 2007
Tonga tokoa ny Krismasy 2007.
Ny ahy moa na inona na inona tranga mandalo amiko sy ny manodidina ahy dia manan-danja foana ny isanandro (pour que chaque jour compte hoy i Jack izay, tao amin'ny Titanic). Dia variana ny mpiara-miasa amiko fa ny ahy vao nitsidika ny Desambra dia efa nipetraka ny hazo krismasikeliko voaravaka jiro eo ambony biraoko fa sady fahafinaretana ho ahy ilay izy no fizarako izany hafaliana izany amin'ny rehetra. Dia mitsiky izay mandalo sy mahita e !
Fa tsaroako fony mbola kely, tena hafa mihitsy izany hiatrika Krismasy izany teo anatrehan'i Papa sy i Mama. Somokotra ery mijery boky hangalana didin'akanjo sy endriky ny lamba. Fa indray mandeha izay... natao ny safidy. Nony injay anefa nandeha nanandrana ilay akanjo dia somary diso fanantenana fa tsy nitovy tamin'ilay tao anaty boky ! Hay moa ny didiny no nalain-tahaka zato isan-jato (chasuble moa izy izay !) fa ilay lokony tsy nitovy satria.... tsy maintsy fotsy ny akanjonay mpanao "arbre de Noël". Indrisy.... Fa tsy naninona loatra aloha satria hiatrika fety dia faly ihany.
Ny an'ilay zandrinay indray dia resaka kiraro. Mijery, dia misafidy dia mividy. Rehefa tonga tany an-trano dia sahirana izy fa nanaikitra ilay izy, somary misy "talon" rahateo... Kay hono naninona ? Natahotra ny tsy hahazo dia nekena fotsiny ! K'angaha azo nanaovana intsony ilay kiraro ...fa efa votsitra ilay tongotra kely ny tontolo andron'ny 25 Desambra tamin'izany ? Ntsôôô...
Na izany aza dia zava-dehibe taminay ankizy ny hoe MAHAZO tamin'izany. Ary ankehitriny... izaho sy ny ankiziko ?
Efa mahay mamaritra ny ankizy ankehitriny :
- Izaho tsy hividiananareo akanjo fa omeo ny vola hijereko azy (samy manana ny lamaodiny tokoa ary tsy iankinana amin'ny lehibe ny safidy an ! Eny fa na dia maharaka tsara aza ny lehibe !!!)
- Izaho tsy hanao palitao izany an ! (jerena anefa ireo jeune garçon, mahafatifaty ery manao izany. Mafana ny andro ka tsy terena koa aloha izy ireo e ! rehefa mba velon-drirana ny pataloha - Mijidina ny lobaka - Asiana fehitenda kely - Mangirana ny kiraro - Salama ny hogo dia... faly i Neny ary mirana i Dada)
- Ny ahy, hoy ilay faravavy (8 taona), kiraro talon sy akanjo midoroboka ohatry ny an'ny ankizy rehetra (Safidy tena mifanaraka amin'ny an'ny olon-dehibe, izy koa mbola azo tarihina tsara. Efa azony ny azy ka tsy andriny ery izany ahatongavan'ny Krismasy izany)
Fa ry zareo ireo tsy mba nanao "arbre de Noël", tsy nety nanao, izahay koa tsy nanery ! Ny hazo krismasy ao an-trano anefa dia tsy neken-drizareo raha tsy eo daholo ireo olona kely sy biby ho an'ny tranon'omby.
Izany aloha no vetsovetson'i Neny amin'izao mialoha Krismasy izao. Ny zava-dehibe dia hoe hafa raha samy andro ny Krismasy fa sady andron'ny tsiaro masina no andron'ny fety ifaliana koa. Mazava ho azy fa ezaka imasoana ny fanavahana ny andron'ny 25 Desambra amin'ny fitafiana, amin'ny fihetsika, amin'ny fanahy sy ny fivavahana, amin'ny sakafo, amin'ny fety sy ny sisa e ! Tsy hadino ny manatitra solombodiakoho ho an'i Papa sy Mama fa mitangorona any daholo rahateo izahay rehetra rehefa fety be toy izany.
Samy hahatratra izany avokoa anie isika. Samia ravoravo e !